ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ သိန်း ၄၀ကျော်ရှိပြီး မဲရုံပေါင်း ၆၀၀၀ ၀န်းကျင်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ သိန်း ၄၀ကျော်ရှိပြီး မဲရုံပေါင်း ၆၀၀၀ ၀န်းကျင်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ သိန်း ၄၀ကျော်ရှိပြီး မဲရုံပေါင်း ၆၀၀၀ ၀န်းကျင်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ
Posted by kln on Sep 7, 2010 in News | 1 comment
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ သိန်း ၄၀ ကျော် ရှိပြီး မဲရုံပေါင်း ၆၀၀၀ ၀န်းကျင် ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၈ ရက် ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်သော ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေတို့တွင် ပါရှိသည့် အခန်း(၄) ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများ တွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့် ရှိကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ စတင် ကျင်းပသည့်နေ့တွင် အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီး ဤဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် မဆန့်ကျင်သော နိုင်ငံသား၊ ဧည့်နိုင်ငံသား၊ နိုင်ငံသားပြု ခွင့်ရသူ သို့မဟုတ် ယာယီသက်သေခံလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူ၊ သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ်၏ မဲစာရင်းတွင်ပါဝင်သူ များမဲပေးနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များကို ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရန် မဲဆန္ဒနယ်အသီးသီးအတွက် ဆန္ဒမဲ ပေးပိုင်ခွင့် ရှိသူများ၏ မဲစာရင်းများကို သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း မြို့နယ်ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲများနှင့် ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲတို့က ပြုစုရမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးတွင် မြို့နယ်ပေါင်း ၄၅ မြို့နယ်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၁၇ ရက် ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်သော ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲနည်းဥပဒေ များ၊ အမျိုးသား လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲ နည်းဥပဒေများ၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ နည်းဥပဒေများတို့တွင် ပါရှိသည့် အခန်း(၁၀) ဆန္ဒမဲပေးခြင်းတွင် ‘မြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲသည် ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်းရှိ ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများ လွယ်ကူစွာ ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရေး၊ သတ် မှတ်ထားသော မဲပေးချိန်အတွင်း မဲဆန္ဒရှင်များအားလုံး မဲပေးနိုင်ရေး နှင့် လျှို့ဝှက်ဆန္ဒပြုနိုင်ရေးတို့ကို ရှေးရှု၍ မဲရုံတစ်ရုံစီ၌ ဆန္ဒမဲပေးရ မည့်ဦးရေနှင့် မဲရုံအရေအတွက်ကို လိုအပ်သလို သတ်မှတ်ပေးနိုင်သည်။’ ဟု ဖော်ပြထားသည်။ သက်ဆိုင်ရာကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲသည် မဲဆန္ဒနယ်အလိုက် ဆန္ဒမဲ ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများ၏ အမည်စာရင်းကို ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း ကြိုတင်ကြေညာ ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အကယ်စင်စစ် နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အမတ်လောင်းတွေဆိုတာ အနာဂတ်မြန်မာနိင်ငံတော်ကြီးကို ကြီးပွားတိုးတက် အောင် ရှေ့ ဆောင်ကြမယ့် ခေါင်းဆောင်ကြမယ့် ခေါင်းဆောင်လောင်းလျှာများဖြစ်ကြပါ၏ ထိုခေါင်းဆောင်လောင်းလျှာများကို လူထု၏ ခေါင်းဆောင်များအဖြစ်ရွေးချယ်ရန်မှာလည်း ကျွန်ုပ်တို့ ပြည်သူများ၏ အထူးတာဝန်ကြီးတစ်ရပ်လည်းဖြစ်ပြန်ပေ၏။
ထို့ ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကို ခေါင်းဆောင်မည့် ခေါင်းဆောင်လောင်းလျှာများကို ပြည်သူတစ်ယောက်၏ အခွင့်ရေးတစ်ရပ် အနေ အဖြစ်ဖြင့် လည်း အထိုက်အလျှောက် ဝေဖန်ခွင့်ရှိသည်ဟူ၍ ခံယူမိပါ၏။
ထိုခေါင်းဆောင်လောင်းလျှာတွေမှာ တိုင်းပြည်ကို ခေါင်းဆောင်နိုင်မယ့် အရည်အသွးတွေ အနည်းနှင့် အများတော့ ရှိရပါလိမ့်မည်။
တိုင်းပြည်၏ခေါင်းဆောင်ဆိုသည်မှာ ပြည်သူများကို ရင်ဝယ်သားကဲ့သို့ဘာညာသာရကာ၊ မင်းကျင့်ဝတ်တွေ ဘာညာကွိကွတွေ စာအုပ်ထည်းက ရှိရှိသမျှသော ဥပဒေ စည်းမျည်း စည်းကမ်း ဘုတ်အုပ်ကြီးကို အသာဘေးချိတ်၍ထားပြီးလျှင် အကြောင်းအရာ တစ်ခုတွင် ဟုတ်သည် မဟုတ်သည် သဘာဝကြသည် မကြသည်ကိုတော့ အများကြီးမဟုတ်ဘူး နည်းနည်းလေးလောက်တော့ ဝေဖန် ပိုင်းခြား နိုင်ရပါလိမ့်မည် ဖြစ်ပါ၏။ ထိုနည်းနည်းလေးကို မှ မဝေဖန်နိုင် မပိုင်းခြားနိုင်လျှင် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တော့ မလုပ်ခြင်ကြပါနဲ့နာဂစ်တုန်းက ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ တောင်သူဦးကြီးတွေရဲ့နွားတွေနေရာမှာ နာဂစ်အစားထိုး နွားများအဖြစ်ဖြင့်သာ သွားရောက် ကူညီသင့်သည်ဟု အကြံပေး တိုက်တွန်း နိုးဆော် လိုပါ၏။
တစ်ချိန်က ( လွန်ခဲ့သော ၁၉၉၀ ခုနှစ် ကာလက ) တရားဝင် ညီမျှတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုမှာ အပြတ်အသတ် အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ပြည်သူတွေတကယ် ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ ပြည်သူ့ ပါတီတစ်ခုကို လုံးဝ ကလိန်ကကျစ်လုပ်ပြီး ယ္ခုတဖန် ပြန်လည်၍ အသစ်ပြုလုပ်သော မညီမျှသော ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြသော ပါတီခေါင်းဆောင်ဆိုသော သူများကို လွန်စွာမှပင် စိတ်ပျက်မိပါ၏။
ရေးဆွဲထားတဲ့ ဥပဒေတို့ ဘာတို့ ကိုလည်း အသာထားလိုက်ပါဦး သူတို့ ရဲ့ ပါတီ နှစ်ခုကို အထက်အောက်ဖြစ်အောင် လုပ်ထားတယ် ( ရွေးကောက်ပွဲက မစရသေးဘူး သူတို့ ကသေချာပေါက်နိုင်နေပြီ ) ဆိုတာ ကို သိနေကြပါလျှက်နဲ့ဘာအတွက်များ ဝင်ပြိုင်ချင်ကြတာလဲ ဆိုတာကိုတော့ မေးကြည့်ရန်ပင် အလိုမရှိလည်းဖြစ်ရပြန်ပါ၏။
ကြွက်ထောင်ချောက် ဆိုသော ကရိယာကစ္စည်း လေးမှာ လွန်စွာမှပင် အဆင့်မြင့်သော ဖွဲ့ စည်းပုံ သဘောတရား ရှိသည်ဟု ဆိုချင်ပါသည် ယ္ခု ရွေးကောက်ပွဲဆိုသော ထောင်ချောက်သည် ကြွက်ထောင်ချောင်လေးလောက်မျှပင် အဆင့်မရှိသော ထမီတန်းကို တုတ်ထောင်ထားသော အလွန်ညံ့ဖျင်း စုတ်ပြတ်သော ထောင်ချောက် မမည်သော ထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်ပါ၏။
(ကိုယ်က ဘယ်လိုပဲပြိုင်ပြိုင် သူက နိုင်နှင့်နေပြီ ဖြစ်ပါ၏၊ အကယ်စင်စစ်တွင် သူတကယ်လိုချင်နေတာကလည်း သူ့ကိုလာပြိုင်မယ့် ပြိုင်ဘက်ပဲဖြစ်၏၊ ဆိုလိုတာက ပြိုင်ဖက်ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ တွေရှိမှ သူက အနိုင်ယူလို့ ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ယှဉ်ပြိုင်ပါတီတွေဆိုတာ သူ့ အတွက် တော်တော် အရေးကြီးတဲ့ သူ့ ကိုအပေါ်ရောက်အောင် တွန်းတင်ပေးမယ့် သူ့ ကိုတရားဝင် အနိုင်ရသွားစေမယ့် အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာကို ယှဉ်ပြိုင်ပါတီတွေရဲ့ ခေါင်းဆောင် နာဂစ်အစားထိုး ဘွတ်ထရိန်း တွေဟာ မသိကြလို့ လား? သို့ မဟုတ် ပြည်သူတွမသိတဲ့နည်းနဲ့အပေးအယူတစ်ခုခု လုပ်ထားကြသလား? တစ်နိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ မနိုင်ရင်တောင် နယ်မြေအလိုက် အမတ်လောင်း လေး ဖြစ်ရင် ကျေနပ်ပြီ အဲ့သည်လိုလား? ( အဲ့ဒါဆို သူတို့ နဲ့ ပေါင်းလိုက် အဲ့ဒါမှန်တယ် ) သို့ မဟုတ်ရွေးကောက်ပွဲ အတွေ့အကြုံလေးရရင် ပြီးရော အဲ့သည်လိုလား?( ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရပ်ကွက်ဖလားလုပြိုင်ပွဲ ဘောလုံးကန် နေတယ်များ အောက်မေ့နေ ကြသလား? )။ စာကြီးပေကြီး ဟိတ်ကြီးဟန်ကြီးတွေရဲ့ပေတံနှင့်တိုင်းရင်တော့ တော်တော်မိုက်ရိုင်းတဲ့ အပြောအဆိုနဲ့ မေးခွန်းတွေဖြစ်နေမှာပေါ့ ဒါလား နိုင်ငံကို ခေါင်းဆောင်လုပ်မယ့်လူတွေ? ပြောလိုက်ကြတာများ နေပြည်တော်ရွာသူကြီးကို ရူးတယ်လေး ဘာလေးနဲ့သူရူးတာ မရူးတာတော့ မသိဘူး သေချာတာက ကိုယ်ကတော့ ရူးနေပြီဆိုတာကို သတိပေးလိုပါ၏။
ဟိုတစ်ခါ ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ အနိုင်ရမှုတွေကို သီးခံပြီး ဒုတိယအကြိမ် ပြန်ပြိုင်ရမယ် ဆိုရင်လည်း ညီတူညီမျှလေးတော့ ဖြစ်ပါစေပေါ့ ဘယ်သူဘဲတက်တက် ပြည်သူက တကယ်တင်မြှောက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရမည်လည်း ဖြစ်ပါ၏။
သူတို့ လွန်စွာမှ စိုးရိမ်နေတဲ့အကြောင်းတစ်ခု ရှိနေပါတယ် အဲ့သည်အကြောင်းက မည်သူမျှသူတို့ ကို မယှဉ်ပြိုင်မှာကို ပါ။ ယဉ်ပြိုင်ပါတီတစ်ခု မှတ်ပုံတင်လိုက်တိုင်း သူကြီးဝမ်းသာလွန်းလို့ဂျွမ်းတွေဘာတွေများထိုးနေလောက်တယ်။ စစ်ဝတ်စုံတွေနဲ့တုန်းကတော့ တိုင်းရင်းသားခွဲထွက်ရေးတွေကို အကြောင်းပြပြီး နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး ဘာညာပေါ့ အခုသူတို့လက်နက်ကရိယာ စားအိုးစားခွက်တွေ စုဆောင်းပြီး လူထွက် ရပ်ကွက်လူကြီးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကြရင် တိုင်းရင်းသားတွေကို အပြုတ်နီးပါးချ ( အကုန်ချဘူး ကုန်သွားလို့ လူဝတ်တွေနဲ့ မချောင်ရင် ဘုန်းကြီးပြန်ဝတ် အဲဘွာဘွာ ….. ယူနီဖောင်းပြန်ဝတ် ကျန်တဲ့ ဆန့် ကျင်ရေးသမားတွေကို တဖက်လှည့်တဲ့နည်းနဲ့ နည်းနည်းတိုးပွားအောင်လုပ် ကာကွယ်ရေးတာဝန်တွေပြန်ယူ လက်ကျန်သစ်တောတွေဆက်ရောင်း (စောရီးစောရီး) ကာကွယ်ရေး အကြောင်းပြချက်ကုန်ကြမ်းမလုံလောက်ရင် နယ်စပ်နယ်နိမိတ် ပြသနာ ပလော်ပလမ်တွေနဲ့ အကြောင်းပြချက်အသစ်တွေ တိုးချဲ့ ဒါလေးဘဲ သူတို့ အကြံ။